Faallo:-Dhawaaqyadda Taban Ee Soomaaliya Waxa Dabadda Ka Riixaysa Dawladda Djibouti!
(Hadhwanaagnews) Wednesday, March 14, 2018 00:44:01
Hargaysa(HWN):-Markii la bilaabay Mashruuca horumarinta Dekedda berbera, waxay ahayd 11/5/2016-ka, waxaanna hadda laga jooggaa laba Sannadood, iyaddoo muddadaasi soo martay Marxaladdo kala duwan oo mid weliba lahayd duruufteedda.
Dalalka sida wayn heshiiskaas uga hor yimid
waxa ka mid ah dawladda taagta daran ee Muqdisho lagu Ilaaliyo, waxaannay Xukuumaddaas itaalka yarri muujisay sida ay uga soo horjeeddo Horumar kasta oo ay shacabka Somaliland gaadhaan. Ra’iisal-wasaarraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr oo maalin kadib, magaalada Muqdisho kaga hadlay Heshiiskaas saddex geesoodka ah ee Somaliland, Ethiopia iyo Shirkadda DP World, ayaa waxa uu yidhi
“Waxaan rabbaa in aan Shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo qayb kama nihin, cidna kamaanu wada-hadal arrintaas. Warsaxaafaddeedkii Wasiirka Dekeddaha dawladda faderaalka Soomaaliya. Mawqifka ku cad Warsaxaafaddeedkaas weeye aragtidda dawladda federaalka Soomaaliya, macnaheeddu waxa weeye heshiiskasta oo la gallaayo oo Masiirriya oo ku saabsan Deked ama Kheyraad dalka meelkasta oo ay tahay waxa u igman oo kaliya dawladda federaalka, ansixintiisana waxa u igman Baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya” Ayuu yidhi Ra’iisal-wasaarraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr.